Howl-gallo lagu cirib-tiro al-Shabaab oo socdaan
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee DANAB ayaa waxaa ay howlgallo ka sameeyeen deegaano dhaca duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose, halkaasoo ay ku sugnayeen xubno ka tirsan argagixisada al-Shabaab.
Saraakiisha Hoggaamineysay howlgalkaas ayaa waxaa ay sheegeen inay ku duuleen xog sirdoon oo ay heleen, isla markaana ay howlgallo qorsheysan ka fuliyeen deegaanka Araare oo ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose ee Maamulka Jubbaland.
Taliyaha qeybta ururka 2aad ee Ciidanka DANAB ee Gobolka Jubbada Hoose Gaashaanle Muraal ayaa sheegay in ciidanka deggan deegaanka Baarsanguuni ay fuliyeen howlgalkaas, isla markaana ay dileen xubno ka tirsan maleeshiyaadka al-Shabaab balse dhankooda aan wax khasaaro ah soo gaarin.
Sidoo kale, waxaa uu hadalkiisa intaasi ku daray in howlgallada ay sii wadi doonaan, isla markaana howlgalkaan ka xiga uu noqon doono deeganka Koban iyo deegaano kale oo ay ku sugan yihiin argagixisada al-Shabaab.
Ciidammada Dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa muddooyinkii u dambeeyay dhaq dhaqaaqyo waxa ay ka wadeen deegaanno ka tirsan gobollada Jubbooyinka halkaas oo ay ku beegsanayeen xubno ka tirsan maleeshiyaadka naflacaariga ee al-Shabaab.